अमेरिका बिरुद्ध नेपालको उत्कृष्ट प्रर्दशन, सन्दिप लामिछानेद्धारा उत्कृष्ट जित -योहोखबर
अमेरिका बिरुद्ध नेपालको उत्कृष्ट प्रर्दशन, सन्दिप लामिछानेद्धारा उत्कृष्ट जित
काठमाडौँ - आईसीसी विश्वकप क्रिकेट लिग –२ अन्तर्गतको त्रिकोणात्मक सिरिजको अन्तिम खेलमा अमेरिकामाथि नेपालले कीर्तिमानी जित निकालेको छ ।
कीर्तिपुरस्थित टियु क्रिकेट मैदानमा बुधबार नेपालले अमेरिकालाई ८ विकेटले पराजित गरेको हो । अमेरिकाले दिएको ३६ रनको लक्ष्य नेपालले ५ ओभर २ बलमा मात्र २ विकेट गुमाएर पुरा गर्यो । यसअघि टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको अमेरिका १२ ओभरमा ३५ रन जोड्दा अलआउट भयो ।
एकदिवसीय अन्तर्रा्ष्ट्रिय क्रिकेट यो सर्वा्धिक कम स्कोरको बराबर हो । यस अघि सन् २००४ मा जिम्बावेले श्रीलंकाविरुद्ध ३५ रन बनाएर सर्वा्धिक कम स्कोर बनाउने कीर्तिमान बनाएको थियो । अमेरिकाका लागि जाभियर मार्सलले सर्वा्धिक १६ रन जोडे । अन्य ब्याट्सम्यानले दोहोरो अंक जोड्न सकेनन् ।
नेपालका सन्दीप लामिछानेले ६ विकेट लिए । सन्दीपले ६ ओभरमा १ मेडनसहित १६ रन खर्चिएर ६ विकेट लिएका हुन् । यस्तै सुशन भारीले ४ विकेट लिए । उनले ३ ओभरमा एक मेडनसहित ५ रन खर्चिए । अमेरिकामाथिको सानदार जितसँगै सिरिजको ४ खेलमा नेपालले २ जित निकाल्न सफल भएको छ ।
ओमानसँग दुई खेलमा पराजित गरेको नेपालले अमेरिकालाई भने दुई खेलमा पराजित गरेको हो । पहिलो भेटमा अमेरिकालाई नेपालले ३५ रनले हराएको थियो । ओमानसँग भने नेपाल पहिलो खेलमा १८ रन र दोस्रो खेलमा ८ विकेटले पराजित भएको थियो ।
ओमानले चार खेल जितेर सिरिज क्लिन स्विप गरेको छ । दुई जितसँगै नेपालले लिगको ४ खेलमा ४ अंक जोडेको छ । नेपाल पुछारबाट दोस्रो स्थानमा रहेको छ । ओमान १० खेलमा १६ अंक जोडेर शीर्ष स्थानमा रहेको छ । अमेरिका १२ खेलमा १२ अंक जोडेर दोस्रो स्थानमा रहेको छ ।
२१९ दिन अघि २०७६ माघ २९ ११:३० मा प्रकाशित
News By Reporter योहो संवाददाता
मलमास के हो ? भुलेर पनि नगर्नुस मलमासमा यि कार्यहरु
लामो प्रतीक्षापछि नेपालले खरिद गरेका दुई रेल आज जनकपुर आउँदै
संविधान दिवसका अवसरमा आजदेखि तीन दिनसम्म टेलिकमको अनलिमिटेड अफर
नेकपा सचिवालय बैठक आइतबारका लागि सर्‍यो
पहिरोले नारायणगढ-मुग्लिन सडक अवरुद्ध
बागमतीसहित देशका विभिन्न स्थानमा वर्षा जारी
घरबेटी प्रहरीबाट कुटपिट गरिएका बिक्रमलाई रोजगारी मिल्यो : तीन महिनाको कोठाभाडा र एक महिना रासन (भिडियोसहित)
हाम्रो बिशेष अपडेटहरुको लागि साइन-अप गर्नुहोस
एभरेस्ट ब्रोडकास्टिंग प्रा लि को तर्फबाट
प्रकाशक - आङ काजी शेर्पा
सुचना विभाग दर्ता नं ८८५/०७५-७६
Downloads Us At:
Copyright © Yohokhabar. All rights reserved.
Design by SunBi